महिला उत्प्रेरित गर्ने प्रेम लागि शेयर के भयो अर्को महिला स्वास्थ्य
ठूलो रोमान्टिक ‘मलाई आउन’ इशारा छ । लगभग आधा लागि महिला गर्ने छु उत्प्रेरित प्रेम लागि छ, यो त ठूलो छैन, नयाँ सर्वेक्षण अनुसार. घर सर्वेक्षण, मान्छे कसरी पत्ता लगाउन धेरै उत्प्रेरित थियो, आफ्नो सम्बन्ध र पछि के भयो. यो बाहिर जान्छ, बढ गर्न आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य संग अधिक छ साधारण तपाईं लाग्छ सक्छ भन्दा. झन्डै पाँच मा एक रिपोर्ट उत्तरदाताओं सम्बन्ध स्थानांतरण र तेस्रो ती गरेको थियो, यो एक पटक भन्दा बढी छ । महिला भइरहेको रिपोर्ट अलिकति अधिक संभावना कदम मानिसहरूको भन्दा । पछि सार्न, अठार प्रतिशत बचत गर्न असफल, आफ्नो रकी सम्बन्ध, सत्र प्रतिशत मन पराउँदैन आफ्नो नयाँ स्थान, र एघार प्रतिशत गिर पनि अरू कसैले प्रेम. अन्ततः, यो जहाँ बारेमा आफ्नो मान झूठ । ‘को मात्र कुरा बनाउन भनेर मलाई सार्न प्रेम छ,’ भन्छन् । ‘मेरो जीवन मा, म सोच्न छैन कि एक काम छ, को पर्याप्त कारण सार्न कहीं सम्बन्ध के हो निर्धारण गर्छ जहाँ म छु । अर्को शब्दमा, कुनै लाज भने तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ कदम लागि प्रेम कि यो बाहिर काम गर्दछ वा छैन । म उत्प्रेरित देश भर को लागि एक सम्बन्ध छ । हामी कुरा धेरै पहिले, समयमा र पछि सुनिश्चित गर्न मेरो कदम थियो रूपमा बारेमा धेरै नयाँ स्थान रूपमा यो थियो उहाँलाई । जो राम्रो थियो, किनभने हामी विभाजित एक जोडी वर्ष पछि । तर म अझै पनि छु टाउको-मा-एडी संग प्रेम मा प्रशान्त उत्तर पश्चिमी, मित्र, आदि, सार्न विश्व भर छ । उहाँले भन्न भूल उहाँले चाहन्छु भएको देखेर.
पन्जा मेरो फिर्ता बाटो देखि कि एक छ । मेरो सल्लाह एक टुक्रा: सार्न छैन लागि एक साथी छ । ‘मेरो पति र म विवाह गरेका थिए तर अमेरिकी शहर पुग्दा उहाँले.
उहाँले उत्प्रेरित र म पछि एक महिना पछि, छोडेर पछि मेरो सपना
यो कदम मलाई धक्का मा चलिरहेको मेरो फोटो व्यापार पूर्ण-समय छ, र हुनत म थियो बारे धेरै चिन्तित रही काम, यो सबै बाहिर लागे भन्दा धेरै राम्रो म आशा । पाँच वर्ष पछि र म छु अझै चलिरहेको मेरो व्यापार पूर्ण-समय । चाहन्थे । उहाँले परिवार थियो यहाँ छ र म छैन गरे, मेरो आफ्नै अचम्मको परिवार मलाई मदत प्राप्त, मा एक घर यहाँ हामी माथि भङ्ग । मेरो थियो, शक्ति को सन्तुलन साँच्चै तिर को साथी संग ठूलो वित्तीय सुरक्षा र कनेक्शन मा शहर (आत्मा, म अनुमान). तर म पछुतो छैन, कदम वास्तवमा छ । म थियो खेती गर्न धेरै स्वतन्त्रता र परिपक्वता पछि म एकल थियो फेरि । ‘म यो गरे जब म थियो । मेरो छोरी गरिरहेको यो । म उत्प्रेरित गर्न बोस्टन देखि लस एन्जलस संग मेरो त्यसपछि-प्रेमी. थिएन खुसीसाथ कहिल्यै पछि बाँच्न उहाँलाई संग, तर म भेट्न मेरो पति मा लस एन्जलस पाँच वर्ष पछि म सारियो, त्यहाँ छ । ‘म संग उत्प्रेरित एक कलेज प्रेमी मार्फत राज्य देखि, पिट्सबर्ग गर्न फिलाडेल्फिया । मलाई थाहा थिएन, एक प्राण मा फिलाडेल्फिया, कहिल्यै थियो त्यहाँ बस्ने, न त पनि भ्रमण दुई पटक भन्दा बढी छ । काम मेरो लागि प्रतीक्षा, या त. अब फिर्ता हेर्दा, यो जस्तै देखिन्छ लाटा । पहिलो केही वर्ष थिए, कुनै न कुनै छ । म विवाह गर्न चाहन्थे र उहाँले थिएन, त्यसैले हामी थिए. गर्न मन लाग्छ फिर्ता गर्न भनेर समय, तर यो थियो कि एक जोखिम बाहिर काम मा अन्त । हामी विवाहित बीस वर्ष अब दुई बच्चाहरु संग छ । ‘म, कलेज स्नातक र छ दिन पछि सारिएको गर्न कोलोराडो हुन नजिकै एक केटा म भेट मेक्सिको मा वसन्त ब्रेक मा.
म सबैलाई भन्नुभयो जसले सुन्न हुनेछ भनेर मेरो बढ संग गर्न केही थियो केटा (सहित)
म कुनै काम गर्न, कुनै आशा, कुनै ठाउँमा बस्न, र बारेमा डलर छ सय रुपैया मेरो खल्ती मा छ । हामी विवाह र एक सुन्दर वर्षीया छोरी । ‘म एक मान्छे भेट अनलाइन मा याहू फिर्ता गर्दा कुनै एक प्रयोग अनलाइन डेटिङ र उत्प्रेरित फ्लोरिडा देखि गर्न रालियफ. हामी विवाह भएको छु उन्नाइस वर्ष अब र दुई बच्चा छन् । म सिकेका कि यो लायक लिने मौका मा केहि देखिन्छ कि पागल सबैलाई. यसबाहेक, तपाईं सधैं कदम फेरि । ‘म उत्प्रेरित देश भर र बायाँ एक क्यारियर म प्रेम लागि मेरो पति सैन्य क्यारियर, केवल महिना पछि हामी विवाह. यो गरेको एक वर्ष भएको र अब म अझै पनि प्रयास गर्दैछु आंकडा कुराहरू बाहिर छ, तर म छु धेरै सिकेका बारेमा आफैलाई र बारेमा सम्बन्ध. यो भएको एक वर्ष को समझ, संघर्ष स्वीकार, सिक्ने र बढ्दै छ । मलाई केही महिना पछि किनभने उहाँले स्पष्ट मन पर्यो मलाई राम्रो थियो जब म पनि टाढा हेर्न.
तर उहाँले दूर उत्प्रेरित लामो पहिले, जबकि म अझै पनि यहाँ बस्न र यो प्रेम
मलाई लाग्छ म मिल्यो राम्रो अन्त को यो सम्झौता छ । ‘म उत्प्रेरित पेंसिल्वेनिया देखि क्यालिफोर्निया. हामी सँगै भएको छु पन्ध्र वर्ष, विवाह, नौ र दस वर्ष पहिले म उहाँलाई तान्नुभयो फिर्ता गर्न पेंसिल्वेनिया. जीवन जोखिम र संभावना लिएर म खुसी छु, कुनै पछुतो छ । ‘म उत्प्रेरित गर्न नरफक, भर्जिनिया, जहाँ म भएको कहिल्यै छु, एक सम्बन्ध थियो भन्ने अझै पनि धेरै नयाँ छ, तर धेरै तीव्र र गम्भीर छ । हामी माथि भङ्ग दस महिनापछि, र म राखिएको घर छ । म छु को प्रक्रिया मा अब बिक्री, तीन वर्ष पछि, हामी यो किनेको, मा एक विशाल हानि । ‘म मेरो जीवन उत्प्रेरित गर्न कोस्टा रिका हुन मेरो प्रेमी को दुई वर्ष । म बाहिर पाइने उहाँले विवाह भएको थियो, पछि दुई सप्ताह आइपुगेपछि. ‘म बाँचिरहेका थियो पार्क शहर, यूटा र छानिएन एक पर्यटक मा एक पल्ट छ ।, तर हामी बाहिर पाइने हामी दुवै हुर्क्यो मा इन्डियाना. हामी तल बन्द पट्टी र खर्च अर्को दुई वर्ष, अनुहार समय, र फिर्ता र निस्कने उडान देश भर सम्म हामी मिल्यो अनिच्छा उत्प्रेरित गर्न क्लिभल्याण्ड. हामी विवाह, प्रेम गर्न ओहियो, र हामी एक बच्चा बाटो मा छ । उहाँले सबैभन्दा ठूलो मानव भएर म कहिल्यै ज्ञात गर्नुभएको छ । एक स्वतंत्र पत्रकार विशेषज्ञता स्वास्थ्य, संस्कृति, र टेक, र त्यो नियमित योगदान आउटलेट जस्तै रोकथाम, महिला स्वास्थ्य, आकार, आकर्षणलाई, पुरुष स्वास्थ्य, स्वास्थ्य समीक्षा, र अधिक. महिला स्वास्थ्य सहभागी विभिन्न संबद्ध विपणन कार्यक्रम, जसको अर्थ हामी प्राप्त हुन सक्छ भुक्तानी आयोगहरु मा चुनिएका उत्पादनहरु मार्फत पनि खरिद गर्न हाम्रो लिंक गर्न खुदरा साइटहरु
← मेक्सिको संसारको च्याट अनलाइन
के छ यो जस्तै एक महिला हुन मेक्सिको मा →